Cadde Gaabow oo loo doortay Gud. gobolka Banadir iyo Duqa mag. Muqdisho
Mogadishu 29 March. 06 Xubnaha golaha deegaanka gobolka Banadir ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku doortay Maxamuud Xasan Cali Cadde Gaabow in uu noqdo Gudoomiyaha gobolka Banadir iyo Duqa magaalada Muqdisho, ka dib doorasho maanta ka dhacday Xarunta Xisbiga ee magaalada Muqdisho.
Doorashadaan oo ay soo qaban qaabiyeen xubnaha golaha deegaanka oo maanta ay soo xaadireen 45 xubnood ayaa aheyd mid si qarsoodi ah codka loo dhiibanayay, iyadoo 35 ka mid ah codadkii la tiriyay uu ku guuleeystay cadde gaabow, iyadoo 10 ka kalena uu helay Daahir Hilowle Macalin oo ah Ganacsade isku soo taagay qabashada xilka Gudoomiyaha gobolka Banadir.
Cadde gaabow oo lagu dhaariyay isla goobta doorashadu ay ka dhacday ayaa hadalo uu ka jeediyay halkaasi waxa uu uga mahad celiyay dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee u doortay xilka Gudoomiyaha gobolka Banadir, isagoo sheegay in isaga ay soo magacowday dowladda FS, balse uu sii doorbiday in shacbiga gobolka uu ka helay Kalsooni.
Gudoomiye Gaabow ayaa balan qaaday in uu ka shaqeyn doono dadaal kasta oo ku aadan soo celinta amniga gobolka, isagoo la kaashan doona qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka gaar ahaan ganacsatada,Siyaasiyiinta iyo maxkamadaha islaamiga, oo uu tilmaamay in ay ka shaqeeyaan howlaha nabadeynta Muqdisho.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banadir C/laahi Xasan Ganey Firinbi oo isna ka hadlay halkaasi ayaa si buuxda xilka gudoomiyenimo ugu wareejiyay Cadde Gaabow, isagoo ugu balan qaaday in uu la shaqeyn doono, isla markaana uu ugu baaqay in ay la shaqeeyaan Gudoomiyeyaasha 16 ka degmo ee gobolka Banadir.
Gudoomiyaha gobolka Sh/hoose Sheekh Yuusuf Indho cadde oo goobjoog ka ahaa madasha doorashadu ay ka dhacday ayaa hadalo uu ka jeediyay Halkaas waxa uu ku taageeray Cadde Gaabow, isagoona sheegay in uu la shaqeyn doono.
Gen. Galaal oo ka mid ah saraakiisha sar sare ee ciidamada qalabka sida ee Somaliya iyo Dr. Siyaasiga Dr. Xuseen Xaaji Bood oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in doorashadu maanta ay tahay rajo wanaagsan oo wax ka badali karta xaslinta gobolka Banadir, oo soo maray marxalado kala duwan.
Madashii doorashada oo ka badalneyd qaababkii hore ayaa dadkii ka qeybgalay waxaa ka mid ahaa Ganacsade Maxamuud Cumar Cadaan oo ka mid ah dhinacyadii dhowaan Muqdisho ku dagaalamay, Taliyaha ciidanka Booliska gobolka Banadir Cali Saciid Xasan cawaale oo uu magacaabay Ra'isulwasaare Geedi iyo Xildhibaan Xasan Dhimbil Warsame.
Dhamaan Dadweynihii goobjooga ka ahaa Doorashada qaabkii ay u dhacday ayaa rajo ka muujiyay maamulka Cadde Gaabow oo ay ku tilmaameen mid looga bixi karo maamuladii isbarbar yaaca ahaa ee ka dhisnaa magaalada Muqdisho.
Amaanka xaruntii Xisbiga oo doorashadu ay ka dhacday maanta ayaa waxaa si weyn u adkeeyay ciidamada Militariga ee halkaasi ku sugan.
Golaha deegaanka gobolka Banadir oo ay dhiseen xubnihii labada gole ee dolwadda FS ee Muqdisho ku sugnaa fikradeedana ay lahaayeen wasiirada hubeysan ee Muqdisho ayaa tani ay noqoneysaa talaabadii ugu horeysay oo lagu tilmaami karo mid xiligaan lagu jiro muhiim u ah gobolka Banadir.